HIV/AIDS ကူးစက်နှုန်းအများဆုံးနေရာ (သို့ မဟုတ်) ရန်ကုန်ြ်မို့– Lat Khat Than
HIV/AIDS ကူးစက်နှုန်းအများဆုံးနေရာ (သို့ မဟုတ်) ရန်ကုန်ြ်မို့ 
မြန်မာနိုင်ငံမှာခုခံအားကျကူးစက်ရောဂါ (HIV/AIDS) ဖြစ်ပွားနှုန်း လျော့ကျသွားပေမယ့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ ရောဂါကူးစက်နှုန်းအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ ပါဝင်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုတယ်။ ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခုခံအားကျဆင်းရောဂါ (HIV/AIDS) ရောဂါဖြစ်ပွားသူခန့်မှန်းဦးရေ ၂၆၀၀၀၀ခန့်ရှိပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း UNAIDS က ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းအရ လက်ရှိဖြစ်ပွားသူဦးရေ ၂၂၀၀၀ ခန့်ရှိတော့ကြောင်းသိရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ HIV/AIDS နဲ့ သေဆုံးသူ နှစ်စဉ် ၁၆၀၀ ကျော်ရှိပြီး ရောဂါကူးစက်မှု ဦးရေ ၁၀၀၀ကျော်ရှိကြောင်း၊ ယင်းပိုးကူးစက်မှုဟာ နယ်စပ်မြို့တွေမှာအဖြစ်များပေမယ့် ရန်ကုန်မြို့ပါဝင်ကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ဟာ နှစ်စဉ် HIV/AIDS ဖြစ်ပွားနှုန်း လျော့ကျခြင်းမရှိတဲ့ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ကြောင်း UNAIDS ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိပါတယ်။
HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို ယခင်က ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းအချို့က ART ဆေးဝါးထောက်ပံ့ပေးခဲ့စဉ်က လုံလောက်မှုမရှိပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေမှာ နိုင်ငံတကာက ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့် ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုပြဿနာ မရှိပေမယ့် ဆေးယဉ်ပါး HIV/AIDS ရောဂါပိုမိုဖြစ်ပွားလာမှာကို စိုးရိမ်နေရတယ်ဆိုတယ်။ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာ လင်းမယားနှစ်ဦး HIV/AIDS ဖြစ်လို့ ART ဆေးပေးနေရာ၊ ရောဂါဆိုးရွားလာလို့၊ စုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ လင်ဖြစ်တဲ့သူက အလုပ်ပြုသွားလို့ “စားရေး”အတွက် ART အပြင်မှာရောင်းချကာ “ဝမ်းရေး”ဖြေရှင်းနေရတယ်လို့ အဖြေထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။
“အရင်က ကိုယ်ခံအား ဘယ်လောက်ရှိမှ ဆေးပေးဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်မျိုး ယခုမရှိတော့ဘူး။ ကိုယ့်မှာလည်း ရောဂါပိုးရှိတယ်။ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်းလည်း ဆေးသောက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာဆေးလိုအပ်သူတွေ လက်လှမ်းမီအောင် လုပ်နေကြတယ်။ အရင်က ART ဆေးရဖို့ ခက်ပေမယ့် အခု ခရိုင်အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်ဆေးရုံတွေမှာ ART ဆေးတွေကို လက်လှမ်းမီတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီ”လို့ မြန်မာပေါ့စတစ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ(ဟောင်း)ဦးမျိုးဆန်းအောင်က ဆိုတယ်။
တကယ်တမ်း HIV/AIDS ကူးစက်ခံရမှုဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးတစ်ပြေးညီ ဖြစ်ပွားနေပြီမဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်၊ ကချင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)နဲ့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ ဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်မားနေကြောင်း၊ ဦးတည်အုပ်စုဖြစ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးအကြောထဲထိုးသွင်းသူများ၊ အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားတွေနဲ့ အမျိုးသားချင်း လိင်တူဆက်ဆံသူတွေမှာ အဖြစ်များကြောင်း၊ ယင်းဦးတည်အုပ်စုထဲမှ မူးယစ်ဆေးအကြောထဲထိုးသွင်းသူတွေမှာ အဖြစ်များကြောင်း ၂၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သား ၁၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးသားလိင်တူဆက်ဆံသူများ ၁၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းထိ ကူးစက်နေတာတွေ့ရှိရကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ခုခံကျကာလသားရောဂါတိုက်ဖျက်စီမံချက်ရဲ့မန်နေဂျာ ဒေါက်တာထွန်းညွန့်ဦးက ဒီဇင်ဘာ ၂၉ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV/AIDS ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုတွေ သိသိသာသာလျော့ကျခြင်းမရှိတဲ့အတွက် HIV/AIDS ကူးစက်မှုကာကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပြည်တွင်း NGO အချို့ကို UNAIDS နဲ့ Global Fund တို့က ထောက်ပံ့ငွေတွေရပ်ဆိုင်းပြီး အစိုးရကိုသာ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့တော့မှာဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း NGO အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဒီဇင်ဘာလလယ်က ဆိုတယ်။ရောဂါကူးစက်မှုကို ထိန်းမထားနိုင်ဘူး။ ကူးစက်နိုင်ခြေများတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ သည်အပေါ်မှာ NGO တွေကို ထောက်ပံ့နေတာကနေ အစိုးရကို ထောက်ပံ့ပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ NGO ကို ထောက်ပံ့ပေးသလောက်၊ အစိုးရကိုထောက်ပံ့ပေးမလားဆိုတာကတော့ မသိသေးဘူးလို့ NGO ဝန်ထမ်းက ဆိုတယ်။
ဘိန်းနဲ့မူးယစ်ဆေးအကြောထဲထိုးသူ အများဆုံးဒေသဖြစ်တဲ့ ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာ HIV/AIDS ကူးစက်မှုနဲ့မြင့်မားပေမယ့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက ဖြစ်ပွားနှုန်းပိုပြီးများကြောင်းသိရပါတယ်။ NGO တွေက ပစ်မှတ်တွေရွေးပြီး ကျန်းမာရေးပညာပေးဆောင်ရွက်ရမှာ တစ်ကြိမ်တည်းသာသွားခြင်း၊ ပြန်ပြီး ကောက်ယူမှု Survey မလုပ်ခြင်း၊ ဟောကြာခြင်းထက် ခုခံအားမြင့်တက်ဆေး ART ရရှိဖို့ အဓိကထားခြင်း၊ လူနာကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုသာလုပ်ပြီး လူကောင်း(ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ) များသူတွေက နှိမ့်သိမ့်ဆွေးနွေးမပြုလုပ်ခြင်းတို့တွေ့ရပါတယ်။ အဓိကမှာ အရက်၊ ဆေးမူးမူးရူးရူးနဲ့အစွပ် Condom မပါဘဲ လိင်ဆက်ဆံမိတာကြောင့် HIV/AIDS ဖြစ်ပွားနှုန်း ရန်ကုန်မှာမြင့်တက်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။
HIV/AIDS ကူးစက်ခံရသူတွေဟာ အနည်းနဲ့အများသက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်တွေက ထုတ်ပစ်ခြင်းခံရတယ်။ သည်အခြေအနေက အချို့လူနာတွေအတွက် နောင်ကြဉ်သွားခြင်း၊ ဘာသာရေးဘက်နွှယ်သွားတတ်သလို အများစုက “ပေါက်တဲ့နဖူး မထူးပြီ”ဆိုကာ လိင်ဆက်ဆံမှုမှာ အစွပ် Condom မပါဘဲ ထင်ရာစိုင်းကာ ရောဂါကူးစက်စေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိနေပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ ပိုများနေပါတယ်။သည်လိုအားနည်းချက်တွေက HIV/AIDS ကူးစက်နှုန်းမကျစေတာဘဲဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်ကုန်မှာ Global Fund နဲ့ UNAIDS က တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ ပြည်တွင်း NGO ခြောက်လခန့် အကူအညီရပ်ဆိုင်းမရမှာဖြစ်ပြီး ယင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အစိုးရက ဆက်လက်တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ဖို့ ထောက်ပံ့ငွေတွေ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း HIV/AIDS ကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းအတွက် ပြည်တွင်း NGO တွေကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချမယ့်အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
Global Fund က မြန်မာနိုင်ငံကို ထောက်ပံ့တာကြာပြီ။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ ဦးတည်ပြီးလုပ်ပေးတာ။ မြန်မာက NGO တွေကို မထောက်ပံ့တော့ပဲ အစိုးရကို တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ လုပ်လာတာဖြစ်တယ်။ NGO တွေကိုပေးမယ့် ထောက်ပံ့ကြေးတွေ၊ အစိုးရကိုပေးတဲ့သဘောပဲလို့ ပြည်တွင်း NGO တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုတယ်။အထောက်အပံ့တွေလျှော့ချလိုက်လို့ HIV/AIDS ကာကွယ်ပေးရေးနှင့်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေ ယခင်ကလောက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိလာပြီး ၀န်ထမ်းလျှော့ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုလျှော့ချခြင်းတို့လုပ်ဆောင်လာရတယ်။
ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ခုခံ/ကာလသား ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစီမံချက်မှာ ” မူးယစ်ဆေးအကြောထဲထိုးသွင်းသူတို့အကြား HIV/AIDS ကူးစက်မှုဒဏ်မှ လျှော့ချရေးအတွက် တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်၊ ဆေးထိုးပြွန်တွေဖြန့်ဝေခြင်း၊ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇွန်လအထိ မူးယစ်ဆေးအကြောထဲထိုးသွင်းသူ ၁၂၈၀၀ ကျော် မူးယစ်ဆေးအစား မက်သာဒုန်းဆေးရည်ကိုတိုက်ကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် နိုင်ငံတို့အကြား ရှေးဦးနိုင်ငံအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။
HIV/AIDS ရောဂါကူးစက်ရာက ရောဂါရှိတဲ့သွေး၊ အမျိုးသားသုက်ရည်(အမျိုးသမီး မိန်းမကိုယ်ရည် မိခင်နို့ရည်) တို့တစ်ဆင့် အဓိကကူးစက်လို့ ရောဂါရှိသူနဲ့ လိင်တူ/လိင်ကွဲအစွပ် Condom မသုံးဘဲ ဆက်ဆံခြင်း၊ ရောဂါပိုးရှိသူသွေးပေကျံတဲ့ဆေးထိုးအပ်၊ ချွန်ထက်တဲ့ဓားစတဲ့ ကိရိယာတို့မှကူးခြင်း၊ ရောဂါပိုးရှိတဲ့မိခင်က ရင်သွေးကိုမိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းမှကူးစက်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်ထိ HIV/AIDS ကူးစက်သူ ၃၇ ဒသမ ၅ သန်းရှိပြီး အရင်ရောဂါရှင် ၃၅ သန်းကျော်က သေဆုံးခဲ့ပြီသိရတယ်။ HIV/AIDS လူနာဟာ ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ နေနိုင်တယ်။ HIV ပိုး ခန္ဓာအတွင်း ရောက်ရှိပြီးဆိုရင် (၂-၄) ရက်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာပြတယ်။ ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနီကွက်၊ ရေယုန်ပေါက်ခြင်း၊ ညဘက်ချွေးပြန်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ လည်းချောင်းနာခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ပြွန်ရည်အကျိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပါးစပ်မှာ မက္ခရုပေါက်ခြင်း၊ တစ်လထက်ကျော်တဲ့အဖျား၊ တစ်လထက်ကြာတဲ့ ၀မ်းလျှောခြင်း၊ တစ်လထက်ကျော်တဲ့ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ တစ်လအတွင်းအကြောင်းမဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၀ ပေါင်ကျော်ကျခြင်း၊ သွေးစစ်ကြည့်ပါက HIV ပေါ့စတစ် HIV Possitive ရှိခြင်းတို့ဖြစ်တယ်။ စမ်းသပ်နည်းမှာ HIV ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ထုတ်ဖို့ ပဋိပစ္စည်းကို သွယ်ဝိုက်စမ်းသပ်ခြင်း၊ ELISA Western Blot နည်းဖြစ်တယ်။ ၁၂ လပတ်ကျော်မှ ပြန်စစ်သင့်တယ်။ ပုန်းခိုနေတဲ့ကာလ Window period မှာ မတွေ့နိုင်ဘူး။ HIV တိုက်ရိုက်စမ်းသပ်နည်းက နျူကလစ်အက်စစ်စမ်းသပ်နည်း Nudeic Acid Amplication Test, PCR. RNA ပဲဖြစ်တယ်။ HIV/AIDS အတွက် ကုသဆေး၊ကာကွယ်ဆေးမပေါ်သေးပါ။ ခုခံအားမြှင့်တင်ဆေး ART နဲ့ လူတမ်းစေ့နေနိုင်ပါတယ်။
Global Fund က မြန်မာနိုင်ငံမှ HIV/AIDS ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့အဆုတ်၊ တီဘီရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂ ဒသမ ၄၄ သန်းအကူအညီပေးမယ် သိရပါတယ်။ ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ AIDS တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ HIV/AIDS က ထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV/AIDS ကြောင့် သေဆုံးသူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကျဆင်းခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် HIV/AIDS ရောဂါကာကွယ်ရေး၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာ HIV/AIDS လူနာ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကုသပေးနိုင်ပြီး ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်း ရန်ကုန်မြို့မှာ အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုတယ်။ရန်ကုန် (သို့) ကူးစက်ရောဂါတွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးမြို့တော်မှာ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာသူများလာသလို လိင်လုပ်သားတွေများလာတယ်။
Ref : The Standard Time
မွနျမာနိုငျငံမှာခုခံအားကကြူးစကျရောဂါ (HIV/AIDS) ဖွဈပှားနှုနျး လြော့ကသြှားပမေယျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးမှာ ရောဂါကူးစကျနှုနျးအမြားဆုံးဖွဈနတေဲ့နရောမှာ ပါဝငျနကွေောငျး ကုလသမဂ်ဂအဖှဲ့အစညျးမြား သတငျးထုတျပွနျခကျြကဆိုတယျ။ ယခငျက မွနျမာနိုငျငံမှာ ခုခံအားကဆြငျးရောဂါ (HIV/AIDS) ရောဂါဖွဈပှားသူခနျ့မှနျးဦးရေ ၂၆၀၀၀၀ခနျ့ရှိပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျး UNAIDS က ထုတျပွနျတဲ့စာရငျးအရ လကျရှိဖွဈပှားသူဦးရေ ၂၂၀၀၀ ခနျ့ရှိတော့ကွောငျးသိရတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှ HIV/AIDS နဲ့ သဆေုံးသူ နှဈစဉျ ၁၆၀၀ ကြျောရှိပွီး ရောဂါကူးစကျမှု ဦးရေ ၁၀၀၀ကြျောရှိကွောငျး၊ ယငျးပိုးကူးစကျမှုဟာ နယျစပျမွို့တှမှောအဖွဈမြားပမေယျ့ ရနျကုနျမွို့ပါဝငျကွောငျး၊ ရနျကုနျမွို့ဟာ နှဈစဉျ HIV/AIDS ဖွဈပှားနှုနျး လြော့ကခြွငျးမရှိတဲ့ မွို့တဈမွို့ဖွဈကွောငျး UNAIDS ရဲ့ ထုတျပွနျခကျြအရ သိပါတယျ။
HIV/AIDS ဝဒေနာရှငျတှကေို ယခငျက ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၊ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးအခြို့က ART ဆေးဝါးထောကျပံ့ပေးခဲ့စဉျက လုံလောကျမှုမရှိပမေယျ့ လကျရှိအခွအေနမှော နိုငျငံတကာက ပူးပေါငျးပါဝငျဆောငျရှကျနတောကွောငျ့ ဆေးဝါးမလုံလောကျမှုပွဿနာ မရှိပမေယျ့ ဆေးယဉျပါး HIV/AIDS ရောဂါပိုမိုဖွဈပှားလာမှာကို စိုးရိမျနရေတယျဆိုတယျ။ဖွဈစဉျတဈခုမှာ လငျးမယားနှဈဦး HIV/AIDS ဖွဈလို့ ART ဆေးပေးနရော၊ ရောဂါဆိုးရှားလာလို့၊ စုံစမျးကွညျ့တဲ့အခါ လငျဖွဈတဲ့သူက အလုပျပွုသှားလို့ “စားရေး”အတှကျ ART အပွငျမှာရောငျးခကြာ “ဝမျးရေး”ဖွရှေငျးနရေတယျလို့ အဖွထှေကျခဲ့ဖူးတယျ။
“အရငျက ကိုယျခံအား ဘယျလောကျရှိမှ ဆေးပေးဆိုတဲ့ သတျမှတျခကျြမြိုး ယခုမရှိတော့ဘူး။ ကိုယျ့မှာလညျး ရောဂါပိုးရှိတယျ။ ကာယကံရှငျကိုယျတိုငျးလညျး ဆေးသောကျဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈတယျဆိုရငျ တဈနိုငျငံလုံးမှာဆေးလိုအပျသူတှေ လကျလှမျးမီအောငျ လုပျနကွေတယျ။ အရငျက ART ဆေးရဖို့ ခကျပမေယျ့ အခု ခရိုငျအဆငျ့၊ မွို့နယျအဆငျ့ဆေးရုံတှမှော ART ဆေးတှကေို လကျလှမျးမီတဲ့အနအေထားမြိုးဖွဈနပွေီ”လို့ မွနျမာပေါ့စတဈအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ(ဟောငျး)ဦးမြိုးဆနျးအောငျက ဆိုတယျ။
တကယျတမျး HIV/AIDS ကူးစကျခံရမှုဟာ တဈနိုငျငံလုံးတဈပွေးညီ ဖွဈပှားနပွေီမဟုတျဘဲ ရနျကုနျ၊ ကခငျြ၊ ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျပိုငျး)နဲ့ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးတှမှော ဖွဈပှားနှုနျးမွငျ့မားနကွေောငျး၊ ဦးတညျအုပျစုဖွဈတဲ့ မူးယဈဆေးအကွောထဲထိုးသှငျးသူမြား၊ အမြိုးသမီးလိငျလုပျသားတှနေဲ့ အမြိုးသားခငျြး လိငျတူဆကျဆံသူတှမှော အဖွဈမြားကွောငျး၊ ယငျးဦးတညျအုပျစုထဲမှ မူးယဈဆေးအကွောထဲထိုးသှငျးသူတှမှော အဖွဈမြားကွောငျး ၂၈ ဒသမ ၆ ရာခိုငျနှုနျး၊ အမြိုးသမီးလိငျလုပျသား ၁၄ ဒသမ ၅ ရာခိုငျနှုနျး၊ အမြိုးသားလိငျတူဆကျဆံသူမြား ၁၁ ဒသမ ၆ ရာခိုငျနှုနျးထိ ကူးစကျနတောတှရှေိ့ရကွောငျး ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန၊ ခုခံကကြာလသားရောဂါတိုကျဖကျြစီမံခကျြရဲ့မနျနဂြော ဒေါကျတာထှနျးညှနျ့ဦးက ဒီဇငျဘာ ၂၉ရကျတှငျ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ HIV/AIDS ကူးစကျပြံ့နှံ့မှုတှေ သိသိသာသာလြော့ကခြွငျးမရှိတဲ့အတှကျ HIV/AIDS ကူးစကျမှုကာကှယျပေးရေးလုပျငနျးတှေ လုပျဆောငျနတေဲ့ ပွညျတှငျး NGO အခြို့ကို UNAIDS နဲ့ Global Fund တို့က ထောကျပံ့ငှတှေရေပျဆိုငျးပွီး အစိုးရကိုသာ တိုကျရိုကျထောကျပံ့တော့မှာဖွဈကွောငျး ပွညျတှငျး NGO အသိုငျးအဝိုငျးမှ ဒီဇငျဘာလလယျက ဆိုတယျ။ရောဂါကူးစကျမှုကို ထိနျးမထားနိုငျဘူး။ ကူးစကျနိုငျခွမြေားတဲ့အခွအေနဖွေဈတယျ။ သညျအပျေါမှာ NGO တှကေို ထောကျပံ့နတောကနေ အစိုးရကို ထောကျပံ့ပေးတော့မယျဆိုတဲ့သဘောပဲ NGO ကို ထောကျပံ့ပေးသလောကျ၊ အစိုးရကိုထောကျပံ့ပေးမလားဆိုတာကတော့ မသိသေးဘူးလို့ NGO ဝနျထမျးက ဆိုတယျ။
ဘိနျးနဲ့မူးယဈဆေးအကွောထဲထိုးသူ အမြားဆုံးဒသေဖွဈတဲ့ ကခငျြနဲ့ရှမျးပွညျနယျတှမှော HIV/AIDS ကူးစကျမှုနဲ့မွငျ့မားပမေယျ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးက ဖွဈပှားနှုနျးပိုပွီးမြားကွောငျးသိရပါတယျ။ NGO တှကေ ပဈမှတျတှရှေေးပွီး ကနျြးမာရေးပညာပေးဆောငျရှကျရမှာ တဈကွိမျတညျးသာသှားခွငျး၊ ပွနျပွီး ကောကျယူမှု Survey မလုပျခွငျး၊ ဟောကွာခွငျးထကျ ခုခံအားမွငျ့တကျဆေး ART ရရှိဖို့ အဓိကထားခွငျး၊ လူနာကို နှဈသိမျ့ဆှေးနှေးမှုသာလုပျပွီး လူကောငျး(ရောဂါဖွဈနိုငျခွေ) မြားသူတှကေ နှိမျ့သိမျ့ဆှေးနှေးမပွုလုပျခွငျးတို့တှရေ့ပါတယျ။ အဓိကမှာ အရကျ၊ ဆေးမူးမူးရူးရူးနဲ့အစှပျ Condom မပါဘဲ လိငျဆကျဆံမိတာကွောငျ့ HIV/AIDS ဖွဈပှားနှုနျး ရနျကုနျမှာမွငျ့တကျနခွေငျးပဲဖွဈတယျ။
HIV/AIDS ကူးစကျခံရသူတှဟော အနညျးနဲ့အမြားသကျဆိုငျရာ အလုပျအကိုငျတှကေ ထုတျပဈခွငျးခံရတယျ။ သညျအခွအေနကေ အခြို့လူနာတှအေတှကျ နောငျကွဉျသှားခွငျး၊ ဘာသာရေးဘကျနှယျသှားတတျသလို အမြားစုက “ပေါကျတဲ့နဖူး မထူးပွီ”ဆိုကာ လိငျဆကျဆံမှုမှာ အစှပျ Condom မပါဘဲ ထငျရာစိုငျးကာ ရောဂါကူးစကျစတေယျ။ မွနျမာနိုငျငံအနှံ့ရှိနပေမေယျ့ ရနျကုနျမှာ ပိုမြားနပေါတယျ။သညျလိုအားနညျးခကျြတှကေ HIV/AIDS ကူးစကျနှုနျးမကစြတောဘဲဖွဈတယျ။ ၂၀၁၇ခုနှဈကုနျမှာ Global Fund နဲ့ UNAIDS က တိုကျရိုကျထောကျပံ့ပေးနတေဲ့ ပွညျတှငျး NGO ခွောကျလခနျ့ အကူအညီရပျဆိုငျးမရမှာဖွဈပွီး ယငျး လုပျငနျးစဉျကို အစိုးရက ဆကျလကျတာဝနျယူလုပျဆောငျဖို့ ထောကျပံ့ငှတှေေ ပေးအပျသှားမှာဖွဈကွောငျး HIV/AIDS ကာကှယျကုသရေးလုပျငနျးအတှကျ ပွညျတှငျး NGO တှကေို တဖွညျးဖွညျးလြှော့ခမြယျ့အစီအစဉျရှိကွောငျး သိရပါတယျ။
Global Fund က မွနျမာနိုငျငံကို ထောကျပံ့တာကွာပွီ။ သူ့ရညျရှယျခကျြက ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှေ ဦးတညျပွီးလုပျပေးတာ။ မွနျမာက NGO တှကေို မထောကျပံ့တော့ပဲ အစိုးရကို တိုကျရိုကျထောကျပံ့ပေးဖို့ လုပျလာတာဖွဈတယျ။ NGO တှကေိုပေးမယျ့ ထောကျပံ့ကွေးတှေ၊ အစိုးရကိုပေးတဲ့သဘောပဲလို့ ပွညျတှငျး NGO တာဝနျရှိသူတဈဦးက ဆိုတယျ။အထောကျအပံ့တှလြှေော့ခလြိုကျလို့ HIV/AIDS ကာကှယျပေးရေးနှငျ့ကုသရေးလုပျငနျးတှေ ယခငျကလောကျ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ လုပျဆောငျနိုငျဖို့ အခကျအခဲတှရှေိလာပွီး ၀နျထမျးလြှော့ခွငျး၊ ဝနျဆောငျမှုလြှော့ခခြွငျးတို့လုပျဆောငျလာရတယျ။
ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန ခုခံ/ကာလသား ရောဂါတိုကျဖကျြရေးစီမံခကျြမှာ ” မူးယဈဆေးအကွောထဲထိုးသှငျးသူတို့အကွား HIV/AIDS ကူးစကျမှုဒဏျမှ လြှော့ခရြေးအတှကျ တဈခါသုံးဆေးထိုးအပျ၊ ဆေးထိုးပွှနျတှဖွေနျ့ဝခွေငျး၊ ၂၀၁၇ခုနှဈ ဇှနျလအထိ မူးယဈဆေးအကွောထဲထိုးသှငျးသူ ၁၂၈၀၀ ကြျော မူးယဈဆေးအစား မကျသာဒုနျးဆေးရညျကိုတိုကျကြှေးခွငျးလုပျငနျးတှပေါ ဆောငျရှကျပေးနပွေီး အာရှ-ပစိဖိတျဒသေတှငျ နိုငျငံတို့အကွား ရှေးဦးနိုငျငံအဖွဈ ဆောငျရှကျနကွေောငျးသိရပါတယျ။
HIV/AIDS ရောဂါကူးစကျရာက ရောဂါရှိတဲ့သှေး၊ အမြိုးသားသုကျရညျ(အမြိုးသမီး မိနျးမကိုယျရညျ မိခငျနို့ရညျ) တို့တဈဆငျ့ အဓိကကူးစကျလို့ ရောဂါရှိသူနဲ့ လိငျတူ/လိငျကှဲအစှပျ Condom မသုံးဘဲ ဆကျဆံခွငျး၊ ရောဂါပိုးရှိသူသှေးပကြေံတဲ့ဆေးထိုးအပျ၊ ခြှနျထကျတဲ့ဓားစတဲ့ ကိရိယာတို့မှကူးခွငျး၊ ရောဂါပိုးရှိတဲ့မိခငျက ရငျသှေးကိုမိခငျနို့တိုကျကြှေးခွငျးမှကူးစကျခွငျးတို့ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ကမ်ဘာမှာ ၂၀၁၇ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၁ရကျထိ HIV/AIDS ကူးစကျသူ ၃၇ ဒသမ ၅ သနျးရှိပွီး အရငျရောဂါရှငျ ၃၅ သနျးကြျောက သဆေုံးခဲ့ပွီသိရတယျ။ HIV/AIDS လူနာဟာ ရောဂါလက်ခဏာမပွဘဲ နနေိုငျတယျ။ HIV ပိုး ခန်ဓာအတှငျး ရောကျရှိပွီးဆိုရငျ (၂-၄) ရကျအတှငျး ရောဂါလက်ခဏာပွတယျ။ ဖြားခွငျး၊ ခမျြးတုနျခွငျး၊ ခန်ဓာကိုယျမှာ အနီကှကျ၊ ရယေုနျပေါကျခွငျး၊ ညဘကျခြှေးပွနျခွငျး၊ ကွှကျသားနာကငျြခွငျး၊ လညျးခြောငျးနာခွငျး၊ ပငျပနျးနှမျးနယျခွငျး၊ ပွှနျရညျအကြိတျရောငျရမျးခွငျး၊ ပါးစပျမှာ မက်ခရုပေါကျခွငျး၊ တဈလထကျကြျောတဲ့အဖြား၊ တဈလထကျကွာတဲ့ ၀မျးလြှောခွငျး၊ တဈလထကျကြျောတဲ့ ခြောငျးဆိုးခွငျး၊ တဈလအတှငျးအကွောငျးမဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ၁၀ ပေါငျကြျောကခြွငျး၊ သှေးစဈကွညျ့ပါက HIV ပေါ့စတဈ HIV Possitive ရှိခွငျးတို့ဖွဈတယျ။ စမျးသပျနညျးမှာ HIV ဗိုငျးရပျဈတိုကျထုတျဖို့ ပဋိပစ်စညျးကို သှယျဝိုကျစမျးသပျခွငျး၊ ELISA Western Blot နညျးဖွဈတယျ။ ၁၂ လပတျကြျောမှ ပွနျစဈသငျ့တယျ။ ပုနျးခိုနတေဲ့ကာလ Window period မှာ မတှနေို့ငျဘူး။ HIV တိုကျရိုကျစမျးသပျနညျးက နြူကလဈအကျစဈစမျးသပျနညျး Nudeic Acid Amplication Test, PCR. RNA ပဲဖွဈတယျ။ HIV/AIDS အတှကျ ကုသဆေး၊ကာကှယျဆေးမပျေါသေးပါ။ ခုခံအားမွှငျ့တငျဆေး ART နဲ့ လူတမျးစနေ့နေိုငျပါတယျ။
Global Fund က မွနျမာနိုငျငံမှ HIV/AIDS ငှကျဖြားရောဂါနဲ့အဆုတျ၊ တီဘီရောဂါတိုကျဖကျြရေးအတှကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနကို အမရေိကနျဒျေါလာ ၃၂ ဒသမ ၄၄ သနျးအကူအညီပေးမယျ သိရပါတယျ။ ၂၀၁၇ ဇူလိုငျလအတှငျး ကုလသမဂ်ဂ AIDS တိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့ HIV/AIDS က ထုတျပွနျတဲ့စာရငျးအရ မွနျမာနိုငျငံမှာ HIV/AIDS ကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျော ကဆြငျးခဲ့ပွီဆိုပမေယျ့ HIV/AIDS ရောဂါကာကှယျရေး၊ ကုသရေးလုပျငနျးဆောငျရှကျရာမှာ HIV/AIDS လူနာ ၅၇ ရာခိုငျနှုနျးသာ ကုသပေးနိုငျပွီး ရောဂါဖွဈပှားနှုနျး ရနျကုနျမွို့မှာ အမွငျ့ဆုံးလို့ဆိုတယျ။ရနျကုနျ (သို့) ကူးစကျရောဂါတှရေဲ့ ထိပျဆုံးမွို့တျောမှာ ရှပွေ့ောငျးအခွခေလြာသူမြားလာသလို လိငျလုပျသားတှမြေားလာတယျ။
ARSA အဖွဲ့က ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်အား ဖမ်းဆီး
ဆီးရီးယားစစ်ဆင်ရေးကြောင့်အမေရိကန်နှင့်တူရကီတို့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နိုင်ခြေ မြင့်တက်